बासमती नेपालको रैथाने धान भएको भन्दै नेपालद्वारा ईयूलाई प्रमाण पेश – फरक दृष्टि
By farak dristhi	 Last updated Feb 6, 2021
नेपालले बासमती धान नेपालको हो भनी दाबी गरेको विषयमा आफ्नो प्रमाण युरोपेली सङ्घ (ईयू)लाई पठाएको छ । भारत र पाकिस्तानले बासमती धान आफ्नो देशको हो भन्दै आधिकारिकताका लागि ईयूमा दाबी पेस गरेपछि नेपालले पनि सो धान आफ्नो देशको हो भनी डिसेम्बर ९ मा दाबीसहितको पत्र दर्ता गराएको थियो । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले बिहीबार नेपालको प्रमाण ईयूलाई पठाएको हो ।
बासमती धानका लागि तीन देशबाट दाबी आएपछि ईयूले तीनवटै देशलाई फेब्रुअरीको पहिलो हप्ताभित्र आआफ्नो प्रमाण पेस गर्न भनेको थियो। त्यसअनुसार नेपालले प्रमाण जुटाएर पठाएको हो।नेपालले १३ बुँदामा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको छ । ती १३ बुँदे दाबीलाई पुष्टि गर्न ८० वटा प्रमाण पेस गरेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) राष्ट्रिय जिन बैङ्कका वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. बालकृष्ण जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
वैज्ञानिक जोशीको नेतृत्वमा बासमती धानबारे अध्ययन गर्न अध्ययन समिति बनेको थियो । सो समितिले एक महिना लगाएर अध्ययन गरेर प्रमाण पेस गरेको वैज्ञानिक जोशीले बताउनुभयो । सन् १९६० देखिका प्रमाणबारे हामीले अध्ययन गरेका छौँ, उहाँले भन्नुभयो, “त्यो बेलादेखि नै बासमती धानका लागि नेपालमा अनुसन्धान भएका छन् । त्यतिबेला देखिका डकुमेन्ट तथा गोरखापत्र अध्ययन गरेर प्रमाण जुटाएका छौँ । ”
लुम्बिनीमा गएर त्यहाँका किसानसँग कुराकानी गर्नुका साथै विभिन्न पुराना व्यक्तिसँग पनि कुराकानी गरिएको वैज्ञानिक जोशीले बताउनुभयो। सांस्कृतिक, आर्थिक, समाजिक तथा साङ्गीतिक रूपमा पनि बासमतीबारे अध्ययन गरेको बताउँदै उहाँले बासमती नेपालको भन्ने पर्याप्त प्रमाण पठाएको बताउनुभयो।
भारतले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा बासमती धानको उत्पादन नेपालको तराईबाट भएको उल्लेख गरेको छ । त्यसले गर्दा नेपालको दाबी नै पुष्टि हुने वैज्ञानिक जोशीले बताउनुभयो।नार्कका कार्यकारी निर्देशक डा. दीपक भण्डारीले बासमती नामको चामल नेपालकै हो भनी यथेष्ट प्रमाण आफूहरूसँग रहेको दाबी गर्नुभयो ।
गोरखापत्र अनलाइनका अनुसार नेपालले सुरुमा बासमती धान नेपालको मौलिक धान हो भनी १३ बुँदे दाबी गरेको थियो । त्यसमा बासमती धानको विषयमा नेपालमा सन् १९६० मा र त्यसअघि पनि अध्ययन भएको प्रमाण प्रस्तुत गरिएको छ । बासमतीको शाब्दिक अर्थ बास्ना दिने धान अथवा चामल भएकाले यसलाई बासमती धान भनिएको नार्कले जनाएको छ ।
नेपालमा विभिन्न थरीका बास्ना आउने धान र चामलका रैथाने जात पाइन्छन् त्यसमध्ये एउटा बासमती हो । बासमती धानका विभिन्न चार प्रकार नेपाल सरकारको राजपत्रमै प्रकाशित भएको छ । नेपालका विभिन्न स्थानबाट सन् १९७० देखि सङ्कलन गरिएका ४७ प्रकारका रैथाने बासमती धानका जात नार्कले अन्तर्राष्ट्रिय जिन बैङ्कमा पनि राखेका छन् । नार्कको राष्ट्रिय जिन बैङ्कले करिब २४ प्रकारका रैथाने बासमती धानका जात वर्षौंदेखि नेपालको विभिन्न क्षेत्रबाट सङ्कलन गरी सुरक्षित राखिएको छ।
यी दाबीका ८० वटा प्रमाण नेपालले पठाएको छ । सबै देशको प्रणाम प्राप्त गरिसकेपछि ईयूले जाँचबुँझ गरी दुई महिनापछि परिणाम दिनेछ।